भेनेजुएला - नेश्नल एसेम्ब्लीले आफ्नो कार्यकाल विस्तार गर्न भोट दिन्छ - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी2बी बजार समाचार
डिसेम्बर 28, 2020 डिसेम्बर 28, 2020 शमूएल गुश विशेष समाचार, ग्लोबल विश्व, समाचार लेख, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, भेनेजुएला
भेनेजुएलाको विपक्षी कांग्रेस अधिग्रहण रोक्नको लागि सारिएको छ।
निर्णयको अर्थ जुआन गुइदो राष्ट्रिय सम्मेलनको नेताको रूपमा रहनेछ।
नयाँ विकासले राष्ट्रपति मादुरोको समस्या निम्त्याउँछ।
राष्ट्रिय सम्मेलनले विगत दुई बर्षमा मादुरोको नेतृत्वलाई धेरै खतरा देखाएको छ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भने सेनाको समर्थनका कारण ठूलो हदसम्म सत्तामा रहन सकेका छन्।
माध्यारोको वेनेजुएलाको युनाइटेड सोशलिस्ट पार्टीका सदस्यहरूका लागि हालैको विधायकीय कदम श a्काको छेस्को हो, जसले नेशनल एसेम्ब्लीमा निर्विरोध सीट जितेका थिए।
भर्खरको चुनाव नतीजाहरुका अनुसार माडोरो पार्टीले नेश्नल एसेम्ब्लीको percent 67 प्रतिशत सीट जित्यो।
विजय धेरै हदसम्म कम प्रतिस्पर्धाका कारण भएको थियो जब गुयडोले आफ्ना अनुयायीहरू र पार्टी उम्मेदवारहरूलाई चुनावमा भाग लिनबाट अलग रहन निर्देशन दिए किनभने उनीहरू धोखाधडी थिए। फलस्वरूप, विपक्षी दल बनाउने देशका चार प्रमुख दलहरूका बहुमतले भाग लिएन।
शब्द विस्तार ग्वाइदोको प्रभारी रहनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ, यद्यपि सांसदहरूले उनको शक्तिमा थप जाँचहरू खोजिरहेका छन्। राष्ट्रियसभालाई कानून पारित गर्ने र राष्ट्रिय बजेट स्वीकृत गर्ने जिम्मा दिइन्छ। यद्यपि यसले विगत दुई बर्षमा मादुरोको नेतृत्वलाई धेरै खतराहरू निम्त्याएको छ।
यसको शक्ति काउन्टर गर्न मादुरोले २०१ 2017 मा राष्ट्रिय संविधानसभा गठन गर्‍यो। सरकारी निकाय उनका क्रुसेडरहरू मिलेर बनेको छ। अन्ततः राष्ट्रिय संविधानसभाले विपक्षीय नियन्त्रणमा रहेको नेशनल एसेम्ब्लीलाई निर्णय लिने क्रममा हावी बनायो।
भर्खरको चुनावी विजयपछि नयाँ मादुरोका वफादारहरूले जनवरी,, २०२१ मा राष्ट्रिय सम्मेलनको शपथ लिने अपेक्षा गरिएको थियो, तर वर्तमान सदस्यहरूले अनपेक्षित अवधि विस्तारले कामलाई थपेको छ।
एक डरलाग्दो अवस्था
संयुक्त राज्यले विपक्षी नेता जुआन गुइदोलाई समर्थन गर्दछ।
ग्वायो र उनका पार्टी सदस्यहरूले नेशनल एसेम्ब्लीको अधिग्रहण रोक्न लगाएको कदमले मादुरोलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा राख्यो। शक्तिशाली देशले विपक्षी नेतालाई समर्थन गरेको कारण ऊ जबरजस्ती घर लिनको लागि उपयुक्त स्थितिमा छैन।
संयुक्त राज्य, जो गुइदोको सबैभन्दा ठूलो विदेशी समर्थनकर्ता हो, चुनावको समयमा भेनेजुएला प्रशासनलाई भौतिक सहयोग पुर्‍याएको आरोपमा दुई संस्था र एउटा निजी कम्पनीको बिरूद्ध प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। मादुरोले आरोपलाई खतरनाक भनेर खारेज गरेको छ।
कम्पनी, एक्स-क्ले सोलुसिओनेस बायोमेट्रिकास सीए, जुन एक बायोमेट्रिक्स फर्म हो, आरोपितहरू मध्ये एक थियो। अनावरण नगरिएका प्रतिबन्धहरु अमेरिका मा फर्म संग कुनै पनि सम्पत्ति अवरुद्ध। तिनीहरूले अमेरिकी संस्थालाई यससँग कारोबार गर्नबाट प्रतिबन्धित गर्छन्।
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीव मुनचिनले दिएको विज्ञप्ति अनुसार:
"भेनेजुएलामा चुनाव चोरी गर्न अवैध मादुरो शासनको प्रयासले भेनेजुएला जनताको प्रजातान्त्रिक आकांक्षालाई बेवास्ता गरेको देखाउँदछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले वेडोजुएली जनतालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको अधिकारको खण्डन गर्न माडुरो शासन र यसको समर्थन गर्नेहरुलाई लक्षित गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ।
सांप्रदायिक समाचार जुआन Guaido निकोलस मडुरो स्टीवन मात्चेन भेनेजुएला
EU ब्रेक्सिट समायोजन आरक्षित स्थापना गर्न
Zhang Zhan, Coronavirus Whistleblower, जेल
परमेश्वर र स्वतन्त्रतामा जडान गर्दै
कालो वर्कर्स भन्छन् अमेजनको एक रेस मुद्दा छ
के एसईओ उत्पादन अनलाइन प्रचार गर्नको लागि उत्तम तरिका हो?
सुमित कुमार मिश्रसँग साक्षात्कार - सीसीपीएलका युवा निर्देशक
रचनात्मक प्याकेजि - - कसरी मैनबत्ती प्याकेजिंग आइडिया तपाइँको प्याकेजिंग व्यवसाय वा स्टार्टअप लाई बढावा दिन सक्छ
स्टाइलको साथ भारतीय कुर्तिस लगाउने
मोहम्मद दाउद अस्लम द्वारा अद्वितीय डिजिटल आर्टवर्क, ज़िला कला पछाडि म्यान
वेबसाइटमा प्रत्यक्ष ट्विटर फिड कसरी इम्बेड गर्ने?
Y योग पोष्टर र पign्क्तिबद्धको लागि